हरेक परिचित सब्जी गाढा रूबी रंग यसको अनूठा उपचार गुणहरूको लागि चिनिन्छ। तर गर्भावस्थामा बीट उपयोगी छ? के यो कुनै पनि मात्रामा प्रयोग गर्न सम्भव छ वा यो भूख मोटेको लायक छ? वा सम्भवतः, यसको विपरीत, तपाई प्रायजसो मीठो रूख खाना खाउनुपर्छ?
केहि प्रकारका सब्जियों को अत्यधिक खपत वास्तव मा एक अवांछनीय पक्ष प्रभाव को कारण हुन सक्छ - रगत मा ओक्सीले को स्तर मा वृद्धि। यद्यपि, यदि तपाईं हरेक दिन भोजनको लागि रातो बोर खाने योजना छैन भने, तपाईं सम्भावित हानिदेखि डराउन सक्नुहुन्न। गर्भवती महिलाको मेनुमा प्राकृतिक उत्पादनको मध्यम समावेशी एकदम संतुलित आहारको कुञ्जी हो।
अनुहार सामान्य मानव जीवन गतिविधिको लागि आवश्यक छ कि शरीरले शरीरबाट पाउँछ। केही आन्तरिक अर्गानहरूमा यो रिजर्भेसनमा स्थगित भएको छ, अत्यधिक घाटाको स्थितिमा, तर बच्चाको प्रतीक्षा अवधिको अवधिमा "अतिरिक्त" स्रोतहरूमा निर्भर हुँदैन। शरीरमा प्रवेश गर्दा लोहेको भोल्युम घटाउने हर्मोग्लोबिनको स्तरमा कमी हुन्छ, जुन, बारीमा, एनीमियाको विकासको मुख्य कारण हो। उन्नत अवस्थामा, फलामको कमी एनीमिया डेलिभरको समयमा रगतको ठूलो हानि बढाउन सक्छ साथै साथै गर्भवती महिला र आमा जन्मजात मा आमाको चरम कमजोरी हुन सक्छ। आश्चर्यजनक कुरा, सामान्य बीपले भविष्यका आमाहरूलाई यो खतरनाक अवस्थाको सामना गर्न मद्दत गर्दछ। गर्भावस्थाको बेला, तपाईंको आहारमा बोरकट, भिनिग्रेट र हिरोइनमा "एक फर कोट अन्तर्गत।" तपाईं तातो निचोड रस पनि पिउन सक्नुहुन्छ।
एक toxicosis संग तल!
रोजगारीको जीवनमा "विषाक्तता" को अवधारणा नियमित रूपमा विलम्ब र उल्टीसँग सम्बन्धित छ। यद्यपि, केही व्यक्तिहरू पत्ता लगाउन खोज्दै किन महिलाको शरीर यति धेरै पीडामा परेका छन्। सफल अवधारणा पछि, महिला निकायमा सबै जैविक प्रणालीहरूले आफ्नो कार्यको क्रम पुन: व्यवस्थित गर्न थाले, किनकि उनीहरूलाई मात्र आमाको शरीरको महत्त्वपूर्ण कार्यहरू कायम राख्नका लागि प्रतिक्रिया चाहिन्छ, तर नयाँ सानो प्राणीको पर्याप्त विकासको लागि पनि यो भविष्यको मातृभाषामा निर्भर हुन्छ। लगभग सबै आन्तरिक अङ्गहरू "दुईका लागि" काम गर्न बाध्य हुन्छन्, र सबैभन्दा ठूलो बोझले महत्त्वपूर्ण जिगरमा पस्छ। यदि गर्भावस्थाको लागी तपाईसँग लिभरसँग कुनै समस्या छ भने, गर्भावस्थाको बेला, तपाईलाई गम्भीर विषाक्त रोगको अन्त्य गर्न सकिन्छ। आधुनिक औषधिले विभिन्न औषधिहरू विकास गरेको छ जुन गर्भवती महिलाहरूको लागि अनुमति दिइएको छ र विषाक्त पदार्थहरूको हानिकारक संचयलाई हटाउन अनुमति दिन्छ जुन जिगरले सामना गर्न सक्दैन। तर निस्सन्देह, उनीहरूलाई प्राकृतिक उत्पादनमा मनपर्छ यो राम्रो छ।
गर्भावस्थाको समयमा बीट आन्तरिक अङ्गहरूको कामलाई सामान्य बनाउन मद्दत गर्दछ। गाढा रातो सब्जीले बेटिसानिन, एक पोषक तत्व वर्णक समावेश गर्दछ जसले जिगर र रगतबाट जहरीला पदार्थहरू उत्प्रेरित गर्न सक्दछ। यसले शरीरमा जमाएको अत्यधिक फाइदा एसिडलाई पनि र रक्त वाहिकाहरू क्लोग दिन्छ। बीट्रोट बर्तनको नियमित प्रयोग पनि एटिटिक रिफ्लेक्ससँग सामना गर्न मद्दत गर्न सक्छ जुन तपाइँको दाँत ब्रश हुन्छ।
तपाईंको आफ्नै भलाइको निरीक्षण गर्न र आफ्नो स्वास्थ्य कायम राख्न यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ। तर, सायद, एक बच्चाको आशा गर्ने हरेक महिलाले पहिला भविष्यका बच्चाको भलाइको साथ सबैलाई अभिव्यक्त गरेको छ। यो आश्चर्यचकित छैन: कस, यदि आमा छैन, कुकुरको ख्याल राख्नेछन् - भले यो अहिले संसारमा देखा पर्दैन? मातृ हेरविचारले आफैलाई फरक तरिकामा प्रकट गर्न सक्छ, तर बच्चाको स्वास्थ्य सुनिश्चित गर्न सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण नियम गर्भवती महिलाको सन्तुलित आहार हो।
सस्तो र सधैं उपलब्ध रूसी रूखहरू, जस्तै गाजर र बीट, आंशिक रूपमा गर्भावस्थाको समयमा आयातित भिटामिन खुराकहरू प्रतिस्थापन गर्न सक्दछ। चुरोट, विशेष गरी, विशेष गरी उपयोगी फोलिक एसिडको उच्च सामग्रीको कारण हो, जसको मूल्य बच्चाको अपेक्षाको समयमा अधिक मात्रामा गाह्रो हुन्छ। अँध्यारो लाल सब्जीबाट पोषक तत्वहरूले मेरुदण्ड र रीढ़को कुखुराको स्वस्थ विकासमा योगदान दिन्छ, त्यसैले गर्भवतीको पहिलो चार महिनामा सबै भविष्यको आमाको आहारमा सबै प्रकारको बीट्रो सलाद र सूप समावेश गर्नुपर्छ।
स्वास्थ्य हड्डिहरु र दाँत
हरेक दिन एक बढ्दो बच्चालाई आमाको भन्दा अधिक उपयोगी तत्व चाहिन्छ, र यदि तिनीहरू आगमन भोजनमा पर्याप्त छैनन् भने, भ्रूणलाई आवश्यक क्याल्सियमले आमाको हड्डिहरु र दाँतबाट लिन्छ। यही कारणले गर्दा सबै जना बच्चाहरु लाई बच्चा जन्माउन सल्लाह दिएका छन् ती चाँडै सकेसम्म दन्त चिकित्सकलाई भेट्न सल्लाह दिईन्छ र पत्ता लगाउँछन् कि दाँत कपाल र मस्तिष्क र अन्य दन्त र गम रोगहरू पहिले नै आवश्यक छैन। यदि तपाईं ध्यानपूर्वक मौखिक स्वच्छताको अनुगमन गर्नुहुन्छ र यस सम्बन्धमा असुविधा र दुखाइ महसुस गर्नुहुन्न भने, चिकित्सकलाई अनुशंसित भ्रमण नछोड्नुहोस्: रोग र सूजनको अनुपस्थितिमा पनि तपाईले दाँतको रोकथाम सफा गर्न नियुक्ति गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईंको बच्चामा क्याल्सियम कमजोरीको कुनै संकेतले सीधा तपाईंको स्वास्थ्यलाई असर गर्नेछ, र दन्त चिकित्सकसँग आफैलाई उपचार गर्नेछ, जब स्थितिमा सबै भन्दा राम्रो कुरा हुँदैन।
गर्भवती समयमा पकाएको बीट तपाईंको उद्धार हुनेछ। धेरै पत्ती सलाद र पौष्टिक जरा सब्जिहरु कैल्शियम हुन्छन्, तर यो सस्तो सब्जीले शरीरलाई पूर्ण आवश्यक पदार्थलाई अवशोषित गर्न दिन्छ। हड्डियों लाई बलियो बनाउन तपाईंलाई अस्टियोपोरोसिसबाट बचाउनेछ, र स्वस्थ दाँत प्राकृतिक स्नेतामा आनन्दित हुनेछ।
एक कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली लगातार बिरामीहरू, संक्रमण र रोगहरूको प्रतिज्ञा हो। रोगजन्य र भाइरसहरूको प्रतिरोध गर्न शरीरको क्षमता बढ्दै आम बर्सकट बीट द्वारा पदोन्नति गरिन्छ। गर्भावस्थाको बेला, महिला निकायका सबै सेनाहरूले भ्रूणको जीवनको संरक्षण र यसको स्वस्थ विकास सुनिश्चित गर्न उद्देश्य राखेका छन्, यसैले, प्रतिरक्षा अधिकतम समर्थन चाहिन्छ। रोगहरूको प्रतिरोध गर्न उत्तम तरीका - विटामिन सी को नियमित खपत यो यो हो कि जो मीठो जरा मा धनी हो, पुरा तरिकाले धेरै सलाद र नाश्ता पूरक। भिटामिन रोक्नदेखि रोक्न, तरकारीहरू पकाउनबाट जोगिन - ताजा पेटहरू थप्न, पट्टी वा स्लाइसमा काट्न र सब्जीको तेलमा पकाउन सकिन्छ।
चयापचय को गति
यदि तपाइँ अझै पनि शंका गर्दछन् कि गर्भ गर्भनिरोधक बेलामा लिन सकिन्छ भने, रोचक तथ्य लिनुहोस्: भविष्यमा आमाको धेरै स्वास्थ्य समस्याहरू ढिलाइ वा बस चयापचय देखि उत्पन्न हुन्छ। पोटेशियम को मदद संग चयापचय त्वरित हुन सक्छ, जो अधिकांश जडहरुमा पाइन्छ। यसले पानीको नुन सन्तुलनलाई नियन्त्रण गर्दछ र जीवनका लागि आवश्यक सबै भिटामिन र खनिजहरूको अवशोषण सुनिश्चित गर्दछ।
पकाउने बीट्रोट गर्भावस्थामा उपयोगी छ, तर आहारमा यसको योजनाबद्ध समावेशको साथ दिमागमा ध्यान दिनुपर्छ कि:
जरा सब्जहरुमा निहित नाइट्रेट भविष्य मा आमा मा कमजोरी हुन सक्छ।
मधुमक्खी रस को धेरै लगातार प्रयोग को मुखर कोर्डहरु को अस्थायी पक्षाघात हुन सक्छ ।
बीट्रोट को अत्यधिक खाने को तथाकथित बिटुरिया मा जान्छ - एक शर्त जसमा मूत्र र स्टूल लाल रंग चित्रित हुन्छ।
तपाईं आफ्नो आहारमा बीट मा निम्न समावेश गर्न सक्नुहुन्छ:
सबै भन्दा राम्रो तरिका सब्जी कोट र प्याज, गाजर र सलाद को अन्य साधारण अवयव संग मिश्रण।
तपाईं ताजा निचोड बीट्रोट रस पिउन सक्नुहुन्छ । जब गर्भावस्था यो गाजर संग मिश्रण गर्न सिफारिस गरिन्छ।
पकाएका बीटहरू स्न्याकका लागि उत्कृष्ट विकल्प हुन्। ग्रीटेड रूप मा आहार को रोशनी देखि सैंडविच मा फैलने को लागी यो राम्रो छ।
यसको अतिरिक्त, सब्जी बेक्ड गर्न सकिन्छ - दुवै अलग र आलु संग। बेक्ड बीटहरू कुनै पनि फ्रिड र स्टुड भएका सब्जहरूसँग मिलाइन्छ।
यदि तपाईं बोरच र vinaigrettes सँग जोडिएको छ भने, आफ्नो मुख्य व्यञ्जन आविष्कार गरेर आफ्नो मेनु विविधता प्रयास गर्ने प्रयास गर्नुहोस्।
शोरबा नितम्ब - सम्पूर्ण शरीर फाइदाको लागि
अध्ययन वास्तविक प्रश्न को पक्षमा: यो सम्भव सुत्केरी आमाले कावीयार छ?
कुन उत्पादनको वजन कम गर्न उपयोगी छ।
उत्पादनहरु मा एस्ट्रोजेन - लाभ र हानि
न्यायिक नीतिशास्त्र को कोड। आधारभूत
को बालकनी मा ककडी
Profiteroles लागि आटा मदिरा कसरी खाना पकाउनु
चीजहरू र उदाहरणहरू - अलर्टमा कसरी चीजहरू कम्प्याक्ट गर्नुहोस्
रामायण Koh चांग Resort4* (Koh चांग, थाईल्याण्ड): समीक्षा र पर्यटक फोटो
झूटा परेलाहरु: समीक्षा भिन्न छन्
येकाटिरिनबर्ग सबैभन्दा स्मारक: तस्बिर र वर्णन
कसरी क्रीम सस मा सामन साथ पास्ता बनाउने?
जीवाश्म - सुंदरता र गुणस्तर मूल्यांकन गर्नेहरूका लागि झोला